I-Qualcomm iya kuxhasa iikhamera ukuya kuthi ga kwii-megapixels ezili-192 | I-Androidsis
UEder Ferreño | | Ukufota, Izaziso
Ukufota kuye kwaba sisixhobo esitsha kwii-smartphones ze-Android zokwahlulahlula kwezinye. Ngesi sizathu, sibona indlela iimveliso ezizisa ngayo uphuculo olubalulekileyo malunga noku, njenge-OPPO kunye ne-10x zoom zoom yayo. Nangona uphuculo kufuneka luvele nakwiprosesa, ekufuneka ixhase olu phuculo. Ngethamsanqa, iQualcomm isebenza nzima kule meko, yazisa ngenkxaso engcono yeetshipsi zayo.
IQualcomm uqobo ikwaqinisekisile ngoku ukuba isebenze ngakumbi ekuphuculeni le meko. Ukuze uphuculo lwenziwe kwiikhamera ezikwi-Android. Kwezi veki Sele sizibonile iimodeli ezineekhamera ezingama-48 MP. Nangona injongo kukuya kwelinye inyathelo ngokubhekisele koku.
Ngenxa yokuba inkampani yaseMelika iye yamangaliswa ngendlela ephawulekayo kunye neengxelo zayo zakutshanje. Baye baqinisekisa ukuba sele benazo iiprosesa ezithile baya kuxhasa iikhamera ukuya kuthi ga kwi-192 MP. Ayisiyonto siyibonileyo kwintengiso, sisenokungayiboni kwakamsinya kwi-Android nayo. Kodwa kuyacaca ukuba iQualcomm ifuna ukuyilungiselela yonke inkqubela phambili eza kuziswa kwiikhamera zeefowuni ezikwi-Android.
IQualcomm ibikhona ukusebenza kuphuculo oluninzi kwicandelo le-smartphone kwezi nyanga. Ifemi ivelise entsha umgangatho wokutshaja ngaphandle kwamacingo, ethembisa ukonyuka okukhulu kwesantya kuyo. Ngoku, bajolise kwimizamo emininzi yokufota, ethembisa ukuthatha indawo ebalulekileyo kunye neeprosesa ezintsha zenkampani. Abanye abaprosesa okwangoku abanawo umhla wokukhutshwa, njengoko sele siqinisekisile.
Okwangoku, isilingi yeekhamera kwi-Android ikwi-MP ye-48 esele siyikhankanyile. Kodwa inkampani ifuna ukuya kwelinye inyathelo. Bathi lo mda ufumaneka kwii-sensors ngokwazo, hayi kwizixhobo. Kuba amaqela anokuxhasa iiprosesa ezinkulu kakhulu, njengoko besetshilo. Inyaniso, ukuya kuthi ga kwi-192 MP inkxaso inokwenzeka. Nangona kunjalo, ezi ntlobo zeenzwa azisetyenziswanga kwii-smartphones, kuba zinkulu, ezinokuthi ziguqule ukuyilwa kwezixhobo. Kungenxa yoko le nto zingasetyenziswanga kwi-Android namhlanje.
Kodwa inkampani ineendaba ezininzi ezinomdla. Kuba abenzi boluvo bayo banokuba neepekseli ezininzi, kodwa bathabathe ukuncitshiswa kwengxolo. Ke iifoto ziya kufunyanwa ngaphandle kwayo nayiphi na inkqubo yangaphambili, ethe ngqo isuka kwisenzi sefowuni ukuya kugcino lwayo. Nangona yonke ingxolo efotweni ibiya kuba kuyo. Kodwa inkampani ithi iiprosesa ezinje ngeSpapdragon 855 okanye ezinye zinje nge-710 0 712, banesakhono sezivamvo ezinkulu kunezangoku.
Ke ngoko, yonke into ibonisa ukuba sikhona Amasango elinye ithuba elikhulu lokufota kwi-Android. Kungekudala siza kubona izivamvo ezinkulu kwii-smartphones kwimarike. Okanye ubuncinci kwezi zivamvo ezintsha ziya kuvela zibonelela ngemifanekiso emikhulu. Into ebonakala ngathi inomdla kwiQualcomm ekutyhaleleni kule meko. Ukongeza, inkampani iqinisekisa ukuba iimvavanyo zokuqala sele zisenziwa.
Ngale ndlela, iQualcomm ivavanya ngeekhamera ezingama-64 zeMP, nangona kwezinye iimeko zikho ngaphezulu kune-100 MP. Ke yinto esele iqhubeka. Ngapha koko, kuthiwa baya kufika kwimarike kwangoko kunokuba abaninzi becinga. Inkampani ngokwayo ithi banokufika ngo-2019. Nangona okwangoku asazi ukuba kuya kuba njalo. Kodwa siyabona ukuba umsebenzi onzima uyenziwa kweli cala. Ke sineenyanga ezimbalwa ezinomdla kakhulu eziphambi kwethu kweli candelo. Kuba siza kukwazi ukubona uphuculo oluninzi kulo mmandla ngo-2019.
Sijonge phambili ekufundeni ngakumbi malunga nezi zixhasi ezaziswa yiQualcomm ngo-2019.. Kwakhona ukwazi kungekudala ukuba zeziphi ii-smartphones eziya kuba ngowokuqala ukusebenzisa ezi zivamvo ze-64 MP okanye ezo ezingaphezu kwe-100 MP. Ngaphandle kwamathandabuzo, utshintsho olukhulu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » I-Qualcomm iya kubonelela ngenkxaso ye-100 ukuya kuthi ga kwi-192 MP yeekhamera
Abafundi abali-16 babanjwa e-India ngokudlala iPUBG Mobile